Chinese Verbal Translator | EMC Manufacturing Limited. ﻿
•	လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာ လုပ်ငန်းညွှန်ကြားချက်များ မေးခွန်းမေးမြန်းသည်များ ကို တရုတ်ဘာသာ မှ မြန်မာဘာသာ ၎င်း၊ မြန်မာဘာသာ မှ တရုတ်ဘာသာ ၎င်း သို့ အဓိပ္ပါယ်မှန်ကန်တိကျစွာ စကားပြောဖြင့် ဘာသာပြန်ပေးရမည်။
•	အခြား အထက်လူကြီးများပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်း လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
•	တရုတ်စာ နှင့် မြန်မာစာ ကောင်းမွန်စွာ ဖတ်နိုင်၊ပြောနိုင်၊ရေးနိုင်(လက်ရေးဖြင့်)၊နားလည် နိုင်ရမည်။
•	တရုတ် မှ မြန်မာ စကားပြော ကောင်းမွန်ပြေပြစ်စွာ နှင့် အဓိပ္ပါယ် မှန်ကန်စွာ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ရမည်။
•	မြန်မာမှ တရုတ် စကားပြော ကောင်းမွန်ပြေပြစ်စွာ နှင့် အဓိပ္ပါယ် မှန်ကန်စွာ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ရမည်။
•	အထက်တန်းအောင်(သို့)ဘွဲ့ရ ဖြစ်လျှင်ပိုအဆင်ပြေသည်။ သို့သော် နဝမတန်း အောင်မြင်သူ များလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
•	အလုပ်အတွေ့အကြုံရှိလျှင် ပိုမိုအဆင်ပြေသည်။ အလုပ်အတွေ့အကြုံ မရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
•	ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာဒုံ စက်မှုဇုံ တွင် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	အဖွဲ့အစည်း နှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်နိုင်သူ
•	အလုပ်ကြိုးစား ၍ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
Company Industry: Chinese Verbal Translator
Chinese Verbal Translator Translator/Interpreter Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon EMC Manufacturing Limited. Translator/Interpreter Jobs Translator/Interpreter Jobs Chinese Verbal Translator မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်များ၊ ရန်ကုန်ရှိအလုပ်များ